ငြိမ်းချမ်းစွာညီလာခံ, မိန့်ခွန်းနှင့်စာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်ခွင့်ဟာအထုပ်သဘောတူညီမှုရ Are
တစ်ဦး 2016 ခုနှစ်တွင် လူထုဆန္ဒစစ်တမ်း ကောလိပ်ကျောင်းသားများကရှုမြင်ပုံကိုအပေါ် စာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်ခွင့် , ထက်ဝက်နီးပါးသူတို့အချို့အခြေအနေတွေမှာကျောင်းဝင်းဖြစ်ရပ်များမှသတင်းမီဒီယာရဲ့ access ကို curtailing ယုံကြည်ကဆိုသည်။
အဆိုပါစစ်တမ်းကိုကောလိပ်ကျောင်းသား 48 ရာခိုင်နှုန်းကကျောင်းဝင်းဆန္ဒပြသူတစ်ဦးတည်းကျန်ရစ်ခံရဖို့လိုတဲ့အခါ 49 ရာခိုင်နှုန်းထောက်ခံမှုထိုကဲ့သို့သောကန့်သတ်အနေဖြင့်သူတို့တစ်တွေသတင်းထောက် biased ပါလိမ့်မည်ယုံကြည်လာသောအခါ, သတင်းမီဒီယာများလက်လှမ်းမှုကိုနှိပ်ကွပ်ထောက်ခံကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ လေးဆယ်လေးရာခိုင်နှုန်းသာထောက်ခံမှုကျောင်းသားများကိုအပေါ်သူတို့၏ဇာတ်လမ်းများသူတို့ကိုယ်သူတို့ပြောပြချင်သည့်အခါစာနယ်ဇင်း access ကို curtailing လူမှုမီဒီယာ ။
မီဒီယာကျောင်းသားဆန္ဒပြသူများသီးသန့်လုံခြုံရေး Give သငျ့သလော
တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများသူတို့ကျောင်းသားများကိုလုံခြုံဟုခံစားရနိုင်ပါတယ်ဘယ်မှာကျောင်းဝင်း "ဘေးကင်းလုံခြုံနေရာများ" ဖန်တီးရန်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟုဆိုသည်။ ဤအကျောင်းသားများအတွက်, ဒီပုံဟာသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ကှာခွားဆိုသည့်ထင်မြင်ယူဆချက်များကိုကြုံတွေ့ရဖို့ရှိခြင်း, မများနှင့်မဆိုလမ်းအတွက်ကျောင်းဝင်းဆန္ဒပြပွဲများအရေးပါဖြစ်အံ့သောငှါသတင်းမီဒီယာနှင့်အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်ရှိခြင်းမဟုတ်ပါဝင်သည်။
အဘယ်အရာကိုလူထုဆန္ဒတွေ့ရှိချက်နှင့် ပတ်သက်. အမှန်တကယ်စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေမယ့်ဒီဖြစ်ပါသည်: သူတို့ကအများကြီးကောလိပ်ကျောင်းသားများကနားမလည်ကြဘူးသို့မဟုတ်ဂရုမစိုကျဘူးဖြစ်စေဘယ်လိုပြသ စကားနှင့်စာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်ခွင့်၏ပထမဦးဆုံးပြင်ဆင်ရေးအာမခံချက် ။
: အဆိုပါအမြီးအမောက်, သင်တန်း, ပထမပြင်ဆင်ချက်ကိုလည်းသူတို့ကတကယ်တော့ပထမပြင်ဆင်ချက်ကိုဖတ်ချင်ပါတယ်လျှင်ကျောင်းသားများကိုသိကြလိမ့်မယ်အရာပထမဦးဆုံးအရာဌာန၌သတင်းလွှမ်းခြုံဆွဲခဲ့ကြကြောင်းဆန္ဒပြပွဲများမျိုး, ကျင်းပရန်ကျောင်းသားအခွင့်အရေးများကိုအာမခံသောကွောငျ့ဖွစျသညျ
ကွန်ဂရက်အဘယ်သူမျှမပညတ်တရားတော်ကိုကိုးကွယ်သည့်ဘာသာတစ်ခုထူထောင်လေးစား, ဒါမှမဟုတ်မြို့အခမဲ့လေ့ကျင့်ခန်းကိုတားမြစ်စေရမည်; သို့မဟုတ်စကားဒါမှမဟုတ်စာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်ခွင့်, သို့မဟုတ်သင့်အတင့လူအ၏ညာဘက်စုဝေးရန်နှင့်မကျေလည်မှုတစ်ခုခံစားရတဲ့နစ်နာမှုတွေအတွက်အစိုးရအယူခံလွှာတင်ရေး abridging ။
လူအ၏ညာဘက်အကြောင်းကိုအဲဒီပစ္စည်းပစ္စယသင့်အတင့စုဝေးရန်နှင့်မကျေလည်မှုတစ်ခုခံစားရတဲ့နစ်နာမှုတွေအတွက်အစိုးရအယူခံလွှာတင်ရေး? ဒါကဆန္ဒပြပွဲများနှင့် ပတ်သက်. အားလုံးတွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာပါပဲ။
ဒါဟာအစီရင်ခံရန်သတင်းစာ၏အလုပ်ရဲ့ ဓမ္မဓိဋ္ဌာန်ကျကျ တစ်ဦးချင်းစီနှင့်အဖွဲ့အစည်းများ၏နှစ်ဦးစလုံးနှင့်ပြင်းထန်စွာ။
2011 ခုနှစ်၏ထိပ်တန်း 10 သတင်းများပုံပြင်များ
စာရေးဆရာငါးဂရိတ် Feature ကိုအကြံပြုချက်များ
အဆိုပါ 2000 ပြည့်နှစ်များ၏ထိပ်တန်း 10 သတင်းစာပညာအရှုပ်တော်ပုံ
ဂျာနယ်လစ်သတင်းရင်းမြစ်ကိုရှာပါနှင့်ပုံပြင်များမြှင့်တင်ပေးရန် Facebook ကိုသုံးပါကိုဘယ်လို
စာနယ်ဇင်းစည်းမျဉ်းများ: Ledes မှစ. Beats မှ
ကမျြးစာကိုဗေဒင်အကြောင်း Says ကဘာလဲ
'' Fois '' နှင့်အတူပြင်သစ် Idiomatic ဖော်ပြချက်
ရောမ Authors Timeline ကို
10 Requisitos မသန်စွမ်း la ဗီဇာင2က de inversionistas en Estados UNIDO
ပေါင်ပေမဟာ (Pompeius Magnus) ၏အကျဉ်းချုပ်အတ္ထုပ္ပတ္တိ
သင်၏အဘရိတ် Pad တက်ဘလက်များသည်အစားထိုးလုပ်နည်း
Formulario N-400 မသန်စွမ်း pedir ciudadaníaရေိ por naturalización
ဘယ်လိုဗုံးအမေရိကန်အလုပ်သမားရေးရာလှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ထိခိုက် 1886 အဓိကရုဏ်းအတွက်ပစ်လွှတ်လိုက်တယ်
Bur Oak, ဂျေ Sterling Morton ရဲ့အကြိုက်ဆုံးပင်
ကြက်သွန်ဖြူပြည်တွင်း - ဘယ်မှာမှ လာ. တဲ့အခါမှာခဲ့သလား
Gangsta Rap ဂီတ
Chastity ၏ပညတ္: လိင်သန့်ရှင်းစင်ကြယ်
Eb ဖြူရဲ့နယူးယောက် 1940 ခုနှစ်
အနုပညာသမိုင်း၏ outline - 30000 ဘီစီ-400 အေဒီကနေ Visual ဝိဇ္ဇာလှုပျရှားမှု
ဒင်း Corll နှင့်ဟူစတန်အစုလိုက်အပြုံလိုက်သတ်ဖြတ်မှု
ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးခရစ်ယာန်ခက် rock band မှတစ်ဦးကလမ်းညွှန်